Xaalada magaalada Gaalkacyo oo saaka degen iyo dad badan oo barakacaya – STAR FM SOMALIA
Waxaa saaka xaalad deganaan ah laga dareemayaa magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo maalmahaan ku dagaalamayeen maamulada Galmudug iyo Puntland.
Deganaanshaha magaalada ayaa waxaa barbar socdo barakac ay sameynayaan dadka ku haray magaalada oo ka baqaya in markale ku dul dagaalamaan ciidamada Galmudug iyo Puntland.
Qaramada Midoobay ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ku dhawaad 70 kun ay ku barakaceen dagaalada muddada seddexda todobaad qaatay ee ka dhacaya galbeedka magaalada Gaalkacyo.
Ciidamada labada maamul ayaa isku horfadhiya deegaanadii lagu dagaalamay, waxaana saacad walbaa la fileysan karaa dagaalo kale oo magaalada ka dhaca.
Dadka ku sugan magaalada ayaa sheegaya in xaafadaha qaar ee magaalada Gaalkacyo ineysan dad badan ku sugneyn marka laga yimaado dad yar oo ilaashanaya hantidooda.
Dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 14 ruux iyo dhaawacyo badan oo la dhigay xarumaha caafimaadka.
Maalintii shalay madaxweynaha Puntland ayaa ku eedeeyay dowlada Soomaaliya iney kaalin ku leedahay dagaalada ka dhacaya magaalada Gaalkacyo.